यी हुन् विश्वप्रसिद्ध १० नर्स, यसकारण भए विश्वप्रसिद्ध
बैशाख २९, २०७४ शुक्रवार १६:२९:०० प्रकाशित
१. फ्लोरेन्स नाइटिङगेल
नाइटिङगेल आधुनिक नर्सिङको संस्थापक मानिन्छिन् । आधुनिक नर्सिङ सेवाको सुरुवात सन् १८४९ मा भएको हो । नाइटिङगेलले औपचारिक रुपमा पहिलोपटक इजिप्टको इन्ष्टिच्युट अफ सेन्ट भिन्सेन्ट डे पावलमा आधुनिक नर्सिङ तालीम सुरु गरेकी थिइन् । उनले त्यसपछि थुप्रै देशमा तालीम दिएकी थिइन्।
उनले धेरै देशमा स्वयम्सेविका बनेर नर्सिङ सेवा प्रदान गरिन् । सन् १८९४ मा क्रिमियाको लडाइमा उनले ३८ जनालाई तालीम दिएर स्वयम्सेवक नर्स तयार पारेकी थिइन् । ती नर्सहरुले घाइते सैनिकको अवस्थाका बारे रिर्पोट तयार पारी पठाए । रोगीका लागि सफा उपकरणले संक्रमण रोक्न सकिन्छ भनी उनीहरुले अस्पतालको पुनसंरचना गरे । घाइतेको जीवनस्तर सुधार नगरे धेरैको ज्यान जाने बुझेर उनी जीवनस्तर सुधारमा लागिन् । नाइटिङगेलको जन्जदिन मे १२ मा नर्सिङ दिवस मनाइन्छ।
२. मार्गरेट सेंगर
उनी महिला स्वास्थ्य आन्दोलनकी अभियन्ता मानिन्छिन् । उनी जन्म नियन्त्रण र परिवार नियोजन कार्यकर्ताको रुपमा विश्वप्रख्यात छिन् । उनले जन्म नियन्त्रण, महिनावारी र सेक्सुवालिटीका बारेमा लेखेर पर्चा बाँड्ने गर्थिन् । उनको यो काम निकै विवादित भएको थियो । यो कामले उनलाई जेल सजाय भएपछि बेलायत जानुपरेको थियो । सन् १९२१ मा सेंगरले अमेरिकी जन्म नियन्त्रण संघ स्थापना गरिन् । उनले सन् १९२३ मा क्लिनिकल अनुसन्धान ब्युरो सुरु गरिन् । यो अमेरिकाको पहिलो कानुनी जन्म नियन्त्रण क्लिनिक थियो।
३. क्लारा बार्टन
क्लारा बर्टन बिरामीको सेवा गर्ने चाहना लिएरै हुर्किइन् । बाबु बिरामी परेपछि क्लाराले उनको मृत्यु नहुन्जेल सेवा गरिन् । यसले उनलाई नर्सिङप्रति प्रेरित ग¥यो, यद्यपि उनी पहिले शिक्षक बन्न चाहन्थिन् । गृहयुद्धका बेला क्लाराले युद्धभूमिमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्थिन् । तत्कालै उनलाई युद्धभूमिमै गएर घाइते सैनिकको सेवा गर्ने अनुमति प्राप्त भयो । बाबुले उनलाई सच्चा देशभक्त बन्नुपर्छ भन्ने सिकाउथे । यही शिक्षा उनले गृहयुद्धका बेला लागु गरिन् । सन् १८६४ मा क्लारा युनियन हस्पिटलको लेडी इन्चार्ज बनिन् । युरोप भ्रमणका बेला क्लाराको इन्टरनेशनल कमिटि अफ रेडक्रसका सदस्यसंग भेट भयो । त्यसबाट प्रभावित भएर अमेरिका फर्किएर त्यसको शाखा खोलिन् । सन् १८७३ मा उनले प्रकोपपीडितको सहयोगमा समर्पित रहदैं अमेरिकन रेडक्रस खोलिन् । उनी अमेरिकन रेडक्रसको पहिलो सभापति बनिन्।
४. मेरी एलिजा महोनी
मेरी एलिजा महोनी अमेरिकामा नर्स बन्ने पहिलो अफ्रिकी मुलकी महिला थिइन् । नर्सिङ स्कुलमा भर्ना हुनुपूर्व उनले १५ वर्षसम्म न्यु इङल्याण्ड महिला तथा बालबालिका अस्पतालमा काम गरिन् । उनी न्युयोर्कस्थित हवार्ड अर्फान एसाइलममा आबद्ध रहँदैं जीवनपर्यन्त नर्सिङ सेवामा बिताइन् । उनी अमेरिका तथा क्यानडाको नर्स एल्मुनाईको पहिलो सदस्य रहिन् । पछि यो संस्था अमेरिकन नर्स एशोसियसन बन्यो । सन् १९०८ मा महोनीले नेशनल एशोसियसन अफ कलर्ड ग्राजुयट नर्सेस स्थापना गरिन्, जुन पछि अमेरिकन नर्स एशोसियसनकै अंग बन्यो । नर्सिङ पेशाप्रतिको प्रतिबद्धता र जातिय विभेद अन्त्य गर्न उनका महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ।
५. अन्ना क्यारोलिन म्याक्सवेल
अन्ना क्यारोलिन म्याक्सवेललाई ‘अमेरिकन फ्लोरेन्स नाइटिंगेल’ पनि भनिन्छ । स्पेनिस–अमेरिकन युद्धका बेला म्याक्सवेलले आर्मी नर्सको नेतृत्व गरिन् । त्यसपछि आर्मी नर्स कप्र्स स्थापना पनि गरिन् । पहिलो विश्वयुद्धका बेला उनको सम्मान गर्दै जनस्वास्थ्यका लागि मेडल दिइयो।
म्याक्सवेल व्यवहारिक नर्सिङको विकासका लागि महत्वपूर्ण अंग बनिन् । उनले औपचारिक तालिम लिनुपूर्वको अस्पतालमा काम गर्न सुरु गरिन् । बोस्टन सिटी ट्रेनिङ कलेजमा स्नातक भएपछि उनले मन्ट्रियल जनरल अस्पतालमा नर्सिङ तालिम कार्यक्रम सुरु गरिन् । उनले नर्स सुपरिटेन्डेन्टको रुपमा म्यासाचुसेट्स जनरल हस्पिटल र सेन्ट ल्युक अस्पतालमा काम गरिन् । उनी न्युयोर्क प्रेस्बाइटेरियन अस्पतालको पहिलो निर्देशक रहिन्,जुन पछि कोलम्बिया नर्सिङ स्कुल बन्यो।
६. डोरोथी लिण्डी डिक्स
डोरोथी लिन्डी डिक्सलाई अमेरिकामा पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सुरु गर्ने श्रेय जान्छ । बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि उनले अमेरिकी सरकारले कसरी मानसिक रोगीलाई व्यवहार गर्छ भनेर अध्ययन गरिन् । डिक्सले धेरै वर्ष कंग्रेसविरुद्ध मुद्दा दिँदैं, कानुनको मस्यौदा तयार पार्दै र विभिन्न दस्तावेज तयार पार्न विभिन्न राज्य भ्रमण गर्दै धेरै वर्ष बिताइन् । उनले सन् १८४९ मा नर्थ क्यारोलिना स्टेट मेडिकल सोसाइटी स्थापना गर्न सफलता पाइन्, जुन मानसिक रुपमा अस्वस्थप्रति प्रतिबद्ध थियो । गृहयुद्ध ताका उनले युनियन आर्मी नर्सको सुपरिटेन्डेन्टका रुपमा सेवा गरिन्।
७. एलेन डफर्टी
न्युजिल्याण्डकी एलेन डफर्टी विश्वकै पहिलो रजिष्टर्ड नर्स हुन् । न्युजिल्याण्डमा पहिलोपटक नर्स रजिष्ट्रेसेन एक्ट लागु गरिएको थियो, जसअन्तर्गत तालिम सकेपछि नर्सहरु कानुनी रुपमा दर्ता हुनुपथ्र्यो । डफर्टी वेलिङटन अस्पतालमा तालिम लिएकी थिइन् भने पाल्मेस्र्टोन नर्थ हस्पीटलकी मेट्रोन थिइन्।
८. माबेल किटोन स्टपर्स
मावेल किटोन स्टपर्सले नर्सिङ क्षेत्रमा जातीय समानताको पक्षमा वकालत गरिन् । उनी नेशनल एशोसियटेड अफ ग्राजुयट कलर्ड नर्सेसको महासचिव रहिन् । उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा सेना र नेभीमा अफ्रिकन अमेरिकन नर्सको प्रवेशका लागि वकालत गरिन् । सन् १९४५ मा उनले सेनामा सबै रंगका मानिसको प्रवेशको संघर्षमा विजय पाइन्।
९. लिण्डा रिचर्ड्स
नर्स बन्ने प्रयासमा अलि–अलि तालिम लिएपछि लिण्डा रिचर्ड्स अमेरिकाको पहिलो नर्स तालिम स्कुलमा पहिलो विद्यार्थीको रुपमा भर्ना भइन् । ग्राजुयटपछि न्युयोर्कको बेलेभ्यु अस्पतालमा काम सुरु गरिन् । उनले पहिलोपटक बिरामीको व्यक्तिगत रेकर्ड गर्ने प्रणालीको विकास गरिन् । यो प्रणालीलाई तत्कालै अमेरिका र बेलायतका अस्पतालले लागु गरे । सन् १८४७ मा लिण्डा बोस्टन ट्रेनिङ स्कुल फर नर्सेसको सुपरिटेन्डेन्ट बनिन् । उनले बेलायतको भ्रमण गरिन्, जहाँ उनले फ्लोरेन्स नाइटिंगेलसंग शिक्षा लिइन् । उनले अमेरिकन सोसाइटी अफ सुपरिटेन्डेन्ट अफ टे«ेनिङ स्कुल स्थापना गरिन्।
१०. क्लारा बर्सिङगर
क्लारा बर्सिङगरले सन् १९८४ मा इथियोपियामा भएको भोकमरीका बेला इन्टरनेशनल रेडक्रस सोसाइटीमा आबद्ध रहेर सेवा गरिन् । उनी नियमित रुपमा टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुँदैं बब गेल्डोफलाई च्यारिटी ब्याण्ड स्थापना गर्न प्रेरित गरिन् । इथियोपियामा उनले बालबालिकालाई खुवाउन थुप्रै केन्द्र खोलिन् । उनले पनामा, लेबनान र पपुआन्युगिनीमा पनि काम गरिन् । आफ्नो अनुभवमा आधारित रहेर उनले ‘मुभिङ माउन्टेन’ नामक पुस्तकलेखिन् । उनले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल मेडल, दि वुमन अफ दि इयर अवार्ड र ह्युमन राइट्स इन नर्सिङ अवार्डसमेत प्राप्त गरेकी छिन्।